Izindaba - Isimiso esisebenzayo sesando sikagesi nezinto ezidinga ukunakwa zisetshenziswa
Sisebenza kanjani isando sikagesi
Isando sikagesi siwuhlobo lokubhora kagesi, ikakhulukazi olusetshenziselwa ukubhola kukhonkolo, phansi, odongeni lwezitini nasetsheni, isando esisebenza ngogesi esiningi singafaniswa ne-drill efanelekile ne-drill, isando, isando sokuprakthiza, ifosholo nezinye izinhloso eziningi zokusebenza .
Isando sikagesi siqhutshwa yi-transmission mechanism piston ku-cylinder reciprocating air compressed, cylinder air pressure cycle change change the cylinder in the hammer reciprocating to hit the top of the brick, as if we hit the brick by a hammer.
Ngaphezu kwesando esisebenza ngogesi njengokushintshana kwe-drill kagesi nokusebenza kokunyakaza okuya phambili nokubuyela emuva, imvamisa isando sikagesi siqukethe umsebenzi we-drill kagesi, kanti esinye isando sikagesi sibizwa nangokuthi umthelela wokuprinta kagesi. Isando sikagesi silungele ubukhulu obukhulu obufana ne-30MM noma ngaphezulu.
Isimiso sokusebenza: umgomo wesando kagesi ukuthi indlela yokudlulisa ishayela i-drill bit ukwenza ukunyakaza okujikelezayo, futhi kukhona ukuqondiswa okuya ngasekhanda elijikelezayo lokunyakaza okuphindayo kwesando. Isando sikagesi siqhutshwa yi-transmission mechanism piston emgodleni ophindisela umoya onomfutho, ushintsho lomjikelezo womoya wesilinda lushayela isilinda esinyangeni esibuyisela ngaphezulu kwesitini, kube sengathi sitshaya ngesitini ngesando, yingakho igama isando sikagesi esingashayeki!
Ukuvikelwa komuntu siqu lapho usebenzisa isando
1. Ama-opharetha kufanele afake izibuko zokuvikela ukuvikela amehlo abo. Lapho besebenza bebheke phezulu, kufanele bagqoke izifihla-buso zokuzivikela.
2, ukusebenza kwesikhathi eside kwenqaba yokufaka izindlebe ezinhle, ukunciphisa umthelela womsindo.
3. Ngemuva kokusebenza isikhathi eside, i-drill isesimweni esishisayo. Lapho uyisusa, kufanele kunakwe esikhunjeni esivuthayo.
4, ukusebenza kufanele kusebenzise isibambo esehlangothini, ukusebenza kwezandla zombili, ukuvimba amandla ahlehla anyakaze ingalo.
5, emi esitebhisini noma umsebenzi ophakeme kufanele enze izinyathelo zokuwa eziphakeme, iladi kufanele libe kusekelweni lwabasebenzi basemhlabathini.
Ukuqapha kokusebenza kwesando
1. Qinisekisa ukuthi ukunikezwa kwamandla okuxhunywe kusayithi kuyahambisana negama legama lesando sikagesi. Noma ngabe kukhona isivikeli sokuvuza.
2. I-drill bit ne-gripper kufanele ihambisane futhi ifakwe kahle.
3. Uma kubhola izindonga, iisilingi naphansi, kufanele siqinisekise kuqala ukuthi akhona yini amakhebuli noma amapayipi afihliwe.
4, ekuphakameni kokusebenza, ukunaka ngokugcwele izinto ezilandelayo nokuphepha kwabahamba ngezinyawo, lapho kunesidingo sokusetha izimpawu zokuxwayisa.
5. Qinisekisa ukuthi iswishi yesando inqanyuliwe yini. Uma iswishi kagesi ikhanyisiwe, ithuluzi lamandla lizophenduka ngokungalindelekile ngokushesha lapho iplagi ifakwa kusokhethi kagesi, okungaholela engcupheni yokulimala.
6. Uma indawo yokusebenza ikude kakhulu namandla kagesi futhi ikhebula liyadingeka ukunwetshwa, ikhebuli yokwelulwa enekhono elanele nokufakwa okufanelekayo kufanele kusetshenziswe. Uma ikhebuli enwetshiwe idlula ephaseji labahamba ngezinyawo, kufanele iphakanyiswe noma kuthathwe izinyathelo zokuvimbela ikhebuli lingacindezelwa futhi lilimale.
Indlela efanele yokusebenza yesando sikagesi
1, "ukubhola ngomthelela" ukusebenza
(1) donsa ukusebenza imodi knob isikhundla umthelela imbobo rotary.
(2) faka i-drill bit endaweni ezobhalwa, bese ukhipha i-switch switch yempumalanga. I-drill iqhutshwa kancane kuphela, ukuze i-chip ikwazi ukukhishwa ngokukhululekile, ngaphandle kwengcindezi enzima yokuyicindezela.
2, ukusebenza kwe "chisel, crushing"
(1) Donsela isibambo semodi yokusebenza usibeke endaweni ethi “isando esisodwa”.
(2) ukusetshenziswa kwesisindo esifile somshini wokubhola wokusebenza, akudingeki ukuthi ucindezele ingcindezi.
3. Umsebenzi “wokubhola”
(1) Khipha isinqa semodi yokusebenza endaweni “yokubhola” (akunasando).
(2) Beka i-drill bit endaweni ezobholwa, bese udonsa inkinobho yokuqalisa. Vele uyinikeze isiqubulo.
Ukusetshenziswa kwengcosana ebuthuntu noma egobile kuzoholela ezimweni zokugcwala ngokweqile ezimotweni futhi kunciphise ukusebenza kahle, ngakho-ke uma kutholakala izimo ezinjalo, kufanele zishintshwe ngokushesha.
Ukuqinisa isikulufa ukuhlolwa kwesando somzimba
Ngenxa yomthelela odalwe ukusebenza kwesando sikagesi, isikulufa esikhulayo sesando kagesi fuselage kulula ukukhululeka. Isimo sokubopha kufanele sihlolwe njalo. Uma isikulufa sikhululekile, kufanele siqiniswe futhi ngokushesha, ngaphandle kwalokho sizoholela ekwehlulekeni kwesando sikagesi.
Hlola ibhulashi lekhabhoni
Ibhulashi lekhabhoni elisemotweni liyadliwa, uma i-degree yokugqoka idlula umkhawulo, imoto izokwehluleka, ngakho-ke, ibhulashi lekharoni eligugile kufanele lithathelwe indawo ngokushesha, ngaphezu kwebhulashi lekhabhoni kufanele ligcinwe lihlanzekile ngaso sonke isikhathi.
Bheka ucingo lokuvikela
Ukuvikelwa kocingo oluyisisekelo kuyindlela ebalulekile yokuvikela ukuphepha komuntu siqu, ngakho-ke izinto zohlobo lwe-((igobolondo lensimbi) kufanele zihlolwe njalo igobolondo lazo kufanele libe phansi kahle.
Isando sikagesi esingenamshini